Adiny telo be izao no hanalana ny lalana Ankorondrano mankany Antanimena. Noho ny fanamboaran-dalana no nahatonga ny fitohanana kanefa tsy mba misy ny vahaolana ialana amin'izany fitohanana lavareny izany mihitsy hatreto. Mbola amam-bolana anefa vao ho vita ny fanamboarana raha araka ny fantatra.
ARTISTA NANOHANA NY FILOHA
Raboussa sy Francis Turbo lasa Tale jeneraly. I Dj Gouty lasa Tale. Samy eo anivon’ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina avokoa izy ireo. Izay artista nanohana an’i Andry Rajoelina izany nandritry ny fampielezan-kevitra dia nizarana toerana ambony na niantohana mba hirotsaka ho solombavambahoaka. Mbola endriky ny kiantranoantrano ihany ny zava-mitranga ary izay olona mahafinaritra ny mpitondra izany ny hirany dia nomena toerana.
IBC HIAKATRA FITSARANA
Hiakatra fitsarana amin’ny herinandro ho avy izao ny raharaha IBC izay notorian’ny fanjakana. Io fahitalavitra tsy miankina io dia nandefa horonantsary mamoafady amin’ny anntoandro. Ny primatiora mihitsy no nandray an-tanana ny fitoriana azy teny amin’ny fampanoavana. Raha ny tsilian-tsofina re dia tsy hovitaina mora ity raharaha ity satria endrika mandrisika ny olona hanao fitondran-tena mamoafady.
NAPOAKA ILAY VATO BE
Izay vao napoaka ilay vato lehibe natahorana hihotsaka etsy amin'ny faritra Tsimbazaza. Andro maro no efa nanaovana ny fanadihadiana momba ity vato ity ary nampiasana teknolojia maro. Betsaka anefa ireo mponina manodidina tsy nety niala tamin'ny trano fonenany na dia voalaza ary fa mampatahotra iny vato iny. Saika nisahotaka ihany ireo mponina manodidina naheno ny fipoahana omaly.
Nandalo tao amin’ny fampanoavana koa ny raharaha Holijaona Raboana izay mpanolotsaina manokan’ny filoha sady filohan’ny IEM. Io farany dia nitory an’i Mahery Lanto Manandafy noho ny fanalam-baràka azy. Niara-nivahiny tamin’ny fandaharana adihevitra amin’ny fahitalavitra izy ireo ary tamin’ny farany aza dia niara-naka sary mba ho mariky ny finamanana. Kinanjo nivadihan’i Mahery Manandafy ary naparitany tamin’ny facebook ny afera maloton’i Holijaona Raboana.
MIHOROHORO NY RAY AMAN-DRENY
Vao mainka koa mihorohoro ny ray aman-dreny eny Ivato sy ny manodidina. Izany dia vokatry ny fahitana fatin-jaza iray izay very andro vitsivitsy talohan’io. Raha tsiahivina, vao tamin’ny alatsinainy koa no nisy zaza very ary hita faty tao anaty rano teny Ambohibao. Mailo avokoa ny rehetra amin’ny fitsenana ny mpianatra ankehitriny satria raha ny fantatra dia saika tamin’ny firavana tao am-pianarana avokoa no nanomboka tsy hita ireo zaza.
Lasa fanaon’ny mpamily nahavanon-doza ny fitsoahana rehefa avy nandona olona toy izay nitranga tetsy Amparibe. Rehefa voadonan’ilay fiara BMW ny moto iray tsy nijanona izy fa nanohy ny lalany, izany hoe nitsoaka. Hita ihany ilay fiara rehefa nokarohina fa kosa efa tsy nisy laharana hamantarana azy intsony na napetraka fotsiny antsisin-dalana. Maty ilay mpitaingina moto izay namela kamboty roa sy mananontena iray.